महिनावारीको समयमा यौ,नसम्पर्क गर्दा हुन्छन् यति धेरै फाइदा |
Home यौन स्वास्थ्य महिनावारीको समयमा यौ,नसम्पर्क गर्दा हुन्छन् यति धेरै फाइदा
महिनावारीको समयमा यौ,नसम्पर्क गर्दा हुन्छन् यति धेरै फाइदा
महिनावारीको समयमा यौनसम्पर्क गर्दा हुन्छन् यति धेरै फाइदा
महिनावारीको समयमा सामान्यतया तीनदेखि पाँचदिनसम्म रक्तश्राव हुन्छ । यो समयमा महिलालाई निक्कै तनाव मात्र हुँदैन,शारीरिक पीडा पनि थपिन्छ ।
तर महिनावारीको समयमा प्राकृतिकरुपले पनि रक्तश्राव कर्म गर्न सकिन्छ ।महिनावारीको पीडा कम गर्न पनि प्राकृतिकरुपमा काम गर्न सकिन्छ ।
विभिन्न प्रकारका अध्ययनले महिनावारी भएका बेला शारीरिक सम्बन्ध कायम गरेमा दुखाई कम हुने,
रक्तश्राव पनि कम हुने गरेको देखिएको छ
रक्तश्राव धेरै भएको अवस्थामा शारीरिक सम्बन्ध कायम गर्दा गर्भाशयमा संकुचन पैदा हुन्छ ।
त्यसले रक्तश्राव कम गर्न सहयोग मिल्छ । दुखाई कम गर्न पनि शारीरिक सम्बन्धले ठूलो भूमिका खेल्छ ।अध्ययन अनुसार महिनावारीको समयमा शारीरिक सम्बन्ध कायम गरेसँगै भिटामिन सी पाइने सुन्तला, कागतीलगायतका फलफूल खानुपर्छ ।
त्यस्तै हरियोग सागसब्जी पनि खानुपर्छ । खासगरी शाकाहारी महिलाको रक्तश्राव कम हुने र महिनावारीको समयमा हुने पीडा पनि कम हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
यौन सम्पर्कको बेला महिलाको मनमा कस्ता कुरा खेल्छन् ?
मानव जिवनको लागि यौन महत्वपूर्ण पाटो हो । यौन सम्बन्ध पुरुष र महिलाबीचको प्राकृतिक आकर्षणको मुख्य कारण हो ।
तर यौन सम्बन्ध राख्दा महिला र पुरुषको मनमा कस्तो भाव आउँछ भन्ने विषयमा सबैलाई कौतुहलता हुन्छ ।
यस विषयमा धेरै अध्ययन भएका छन् भने लेख रचना समेत लेखिएका छन् ।
पछिल्लो पटक गरिएको एक शोधले महिलाले ओच्छ्यानमा के चाहन्छन् भन्ने विषयमा नयाँ तथ्य बाहिर ल्याएको छ ।
ओच्छ्यानमा हुँदा महिलाहरु आफ्नो पार्टनरले पुरै ध्यान यौन सम्बन्धमै देओस भन्ने चाहन्छन् । सर्वेमा सहभागी करिव ४२ प्रतिशत महिलाले आफूलाई ध्यान दिएको महसुस भए पुरुषको प्यार बढी अनुभव हुने बताएका थिए ।
शोधमा सहभागी अधिकांश महिलाले उपयुक्त मौषम वा वातावरण नबने यौन आनन्द लिन नसकिने बताए । चिसो मौसममा चिसा खुट्टा लिएर पुरुष यौन
क्रिडा गर्न तयार भएपनि महिलालाई त्यसले गाह्रो हुने उनीहरुको भनाइ थियो । त्यसैगरी गर्मीमा सेक्सको चाहाना र आनन्द बढी हुने महिलाको अनुभव छ ।
यौन क्रिडामा आसनको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने महिलाको भनाइ छ । शोधमा सहभागी महिलाका अनुसार सुताएर उनीहरुको तल २र३ वटा सिरानी राखेर यौन क्रिडा गर्दा महिलाले बढी सन्तुष्टी अनुभव गर्ने गर्छन् । त
र सुतेका पुरुषमाथि चढेर यौन सम्पर्क गर्दा पनि मजा आउने उनीहरुको भनाइ छ । त्यसै गरी अधिकांश महिलाले डगी स्टाइल अर्थात महिला चार हात खुट्टा टेकेर बस्ने र पुरुषले पछाडीबाट यौन क्रिडा गर्ने पोजिसन सबै भन्दा आनन्ददायी रहेको बताए ।
अधिकाँश युवतीहरुले पुरुषहरुले हात र मुखको प्रयोग बढी गरेको राम्रो बताए । ९० प्रतिशत युवतीले पुरुषले मुखको प्रयोग गरेपछि मात्र चरम आनन्दमा पुग्ने बताएका थिए ।
अधिकाँश पुरुषहरु महिलाको भन्दा पनि आफ्नो सन्तुष्टीलाई बढी ध्यान दिन्छन् । कतिपय अवस्थामा त महिला तयार नहुँदै पुरुष स्खलित हुन्छन् ।
सर्वेका क्रममा अधिकाँश माहिलाहरुले आफूहरु १० मिनेट भित्र चरम अवस्थामा पुग्ने तर पुरुष त्यतिन्जेल पनि हतारिने बताए ।
महिला शरीर आफैमा संवेदनशील चिज हो । तर पुरुषहरु आफ्नै जस्तो गरेर महिलासँग ब्यवहार गर्छन् । सेक्सको शोधका क्रममा महिलाहरु योनीको माथिल्लो भित्री भागमा हुने नस्पटमा स्पर्ष भए निक्कै छिटो आनन्दित
हुने पत्ता लागेको छ । नस्पटमा चलाउँदा महिला तयार हुने र छिटो चरम सीमामा पुग्ने शोधकर्ताको भनाइ छ । यसका लागि औंलाको प्रयोग महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यौन सम्पर्कपछि केही महिलालाई रक्सी सेवन गर्ने मन पनि हुन्छ । त्यो बेला उनलाई रक्सीले आफूलाई फाइदा गर्छ वा गर्दैन भन्ने थाहा हुँदैन । भोक लाग्नु यौन सम्पर्कका क्रममा शक्ति खर्च हुन्छ । यसकारण तपाईको जोडीले भोक लागेको महशुस गरेका हुन्छ ।
फेरि बढ्यो जीवन विकास लघुवित्तको सेयर मूल्य, आज कति कित्ता बिक्री भयो त ?
गुप्तांगका रौँहरु हटाउनुपर्ने कारण र यसका नोक्सानिहरु
अलिकति के छि,रे,को थियो मलाइ पि,डा भयो मैले पुरै छि,रा,उन दिएन:१४ वर्षको उमेरमै आफ्नो कुमारित्व गुमाएको युबतिको कथा